ဂရန်း Canyon အ KGCN V2 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 527 ကို MB
downloads ရယူရန္ 53 330
Author: Holger Sandmann, အန်တိုနီယိုက C, Maurizio က G (Ozx)
ဒါကငါတို့သည်လည်းယခင်ကကြုံတွေ့အချို့သော graphical မကောင်းတဲ့ကိစ္စများပြင်ပေးဖို့, အ photoreal ရှုခင်းထဲကကိုလည်းလွှမ်းခြုံကိုတိုးချဲ့ 2.0 တန်ချိန် Holger ရဲ့ကွက်၏ဗားရှင်းအသစ်အပါအဝင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံကြောင်း, အရန်း Canyon အများနှင့် KGCN လေဆိပ်သစ်နှင့်အဆုံးစွန်သောဗားရှင်း 10 ဖြစ်ပါတယ်။
အဘို့အ Photoreal ရှုခင်း FSX SP2 /P3D autogen နှင့်အတူ 2m / pixel တစ်ခု resolution ကိုအနည်းဆုံး created နှင့်ဇာတိ FSX/P3D nightlights ။
ထိုမြေပြင်အနေအထားများနှင့်အပင်တို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု snowed ကြောင့်နွေရာသီရာသီဒါပေမယ့်လည်းအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ flyable သာ, က, အဖြစ်ကောင်းစွာကောင်းသောလှပါတယ်။ အဆိုပါကော်လိုရာဒိုမြစ်က၎င်း၏အပြည့်အဝအရှည်အတွက်ကာတွန်းရေရတယ်သိရသည်။
အကြံပြု setting များကို: သိပ်သည်းကွက် resolution ကို2တန်ချိန်, ရှုခင်းအလွန်သိပ်သည်း, autogen ။
ဗီဒီယို: ရန်း Canyon အ & IRIS က F-20 Rikoooo.com များအတွက် Airlink အားဖြင့်တင်ပြ
> Add-ons တွေကို Rikoooo - -> က Grand Canyon အ KGCN V2 additional information ကိုသင်၏ "Start Menu ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါသည် FSX & P3D"
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 525 ကို MBထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
အရေးကြီးဘယ်လိုရှုခင်းကိုအသုံးပွုဖို့? သငျသညျက Grand Canyon အ Arpt (အမျိုးအစားလေဆိပ်ကနေသင်တို့ပြေးယူနိုင်ပါသည် ဂရန်း Canyon အ or KGCN)
အောက်တွင်, ရှုခင်းအားဖြင့်စဉ်းစား Photo-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဒေသများ (အားလုံးအတွက် 7) ဖြစ်ကြသည်။ အဲ့ဒါအပြင်ရှိတဲ့ default ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ FSX နောက်တဖန်ပြသပါလိမ့်မယ်။